खुसिको खबर , छिटो हेर्नुस दैलेखको खा’नीबाट पे’ट्रोल र नवलपरासीबाट फ’लाम – Gorkhali Dainik
खुसिको खबर , छिटो हेर्नुस दैलेखको खा’नीबाट पे’ट्रोल र नवलपरासीबाट फ’लाम
March 15, 2021 954
“काठमाण्डाै – दैलेखमा पे’ट्रोलियम प’दार्थ र नवलपरासी को धौवादीमा फ’लाम खा’नी रहेको अ’नुमानमा सरकारले उ’त्खननका लागि अध्ययन अन्वे’षण गरिरहेको छ । दैले खका विभिन्न ठाउँमा आगोको ज्वाला निस्किएकाले त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ । त्यस्तै नवलपरासी मा फलाम खानी रहेको पुष्टि नै भइसकेको छ । धौवादी फलाम कम्पनी खोलेर सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ ।
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ र फलाम निकाल्ने अवस्थामै पुग्यो जस्तो गरी भा’षण दिँदै आउनुभएको छ । तर दुवै ठाउँमा अहिले प्रारम्भिक च’रणका काम मात्रै भइरहेका छन् । लक्ष्यअनुसार द्रु’त गतिमा काम भएमा पनि चार/पाँच वर्षभित्रमा न त पेट्रोलियम पदार्थ नि’स्कने छ न त व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरी नै फलाम निस्कनेछ ।
“धौवादीमा उ’त्खननको काम सुरु गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने
“नवलपरासीको धौवादीमा फलाम उ’त्खननको काम थाल्न कम्तीमा पनि तीन वर्ष लाग्ने भएको छ । धौवादी फलाम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनक चन्दका अनुसार फलाम खानीमा अहिले पनि अध्ययनकै काम चलिरहेको छ ।
“पाइलट टे’स्टिङका लागि पाँच टन खनिजको नमुना चीन पठाइएको थियो, चीनको प्रयोग शालामा परीक्षण गर्दा धौवादीमा फलाम रहेको पुष्टि भइसकेको छ । परीक्षणले औद्योगिक प्रशोधनमार्फत धौवादीको खानीबाट शु’द्ध फ’लाम निस्कने पक्का भएको देखिएको सीईओ चन्दको भनाइ छ ।
‘”हामीले पठाएको पाँच टन नमुना खनिजमा ३५ प्रतिशत फलाम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ तर यस विषयमा थप अध्ययन पनि जरुरी छ’, सीईओ चन्दले भन्नुभयो ।
“धौवादी फलाम खानीमा अहिले १३ सय मिटर गहिरो ड्रिलिङको काम भइरहेको छ । ड्रि”लिङ पछि आउने भ’ण्डारणसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा अर्को चरण को सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । ‘ड्रिलिङको रि’पोर्ट नै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आधार हुनेछ । त्यसपछि बल्ल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिनेछ’, च’न्दले भन्नुभयो ।
“अब सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ, त्यसपछि डीपीआर हुनेछ, डीपीआर पछि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) हुनेछ, त्यसपछि बल्ल उत्पादनकै लागि भनेर काम सुरु हुनेछ । यी सबै अध्ययनका लागि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ ।
“खानीमा कति फलाम छ भन्ने कुरा अहिले थाहा भइसके को छैन, आर्थिक रूपमा कत्तिको फाइदा हुन्छ हेरेर मात्रै उत्पादनको काम थाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गरेको लगानी पनि नउठ्ने परिमाणमा फलाम रहेछ भने उत्पादन नै सुरु नगर्न पनि सक्छौँ’, सीईओ चन्दले भन्नुभयो ।
“कम्पनीका लागि जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । खा’नीसम्म सडक पुर्‍याउनका लागि ठेक्का आ’ह्वान भइसकेको छ । खानी क्षेत्रमा विद्युत् पहुँचका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
“दैलेखको पेट्रोल : कहाँ र कति परिमाण छ भन्ने दुई वर्षपछि मात्रै थाहा हुनेछ
“दैलेखका श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका, तल्लो डुङ्गेश्वर लगायत क्षेत्रका जमिनमा अनवरत रूपमा बलिरहने आगोको ज्वा’लाका कारण पे’ट्रो`लियम पदार्थ रहेको अनुमान छ । तर ठ्याक्कै कहाँनेर र कति परिमाणमा पेट्रालियम छ भन्ने थाहा पाउनका लागि झण्डै चार किलोमिटर गहिरो ड्रि’लिङ गरेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ । ड्रि’लिङको काम भने सुरु भएको छैन ।
“चीन सरकारसँग को समन्वयमा अप्रत्यक्ष विधिमार्फत सतहको अध्ययन गरिएको थियो । सतहबाट हुने अ’ध्ययन को चरण सकिएको छ । गएको वर्ष यो अध्ययन सकेर चीनको टोली फर्किइसकेको छ ।
“चिनियाँ टोलीले दैलेखबाट लगेको अध्ययनले त्यो भौगोलिक क्षेत्रमा पे’ट्रोलियम रहेको कुरा पुष्टि गरेको थियो ।
“पे’ट्रोल अथवा ग्यास छ कि छैन भन्ने कुरामा विवाद नै छैन, किनकी आगोको ज्वाला अनवरत रुपमा बलिरहेको छ । तर कुति परिमाणमा छ र कहाँनेर छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छैन, ठूला ठूला पहाड भएकाले एक ठाउँमा भएको पे`ट्रोलियम धेरै पर पुगेर जमिनको सहतमा निस्किएको पनि हुन सक्छ ।’ खानी तथा भुगर्भ विभागका उपमहानि र्देशक डा. सुधीर रजौरेले भन्नुभयो ।
“कहाँ र कति परिमाणमा पेट्रोलियम छ भन्ने पुष्टि गर्नका लागि ड्रिलिङ गरेर मात्रै थाहा हुनेछ ।
“ड्रिलिङको काम पोहोर नै सुरु हुनुपर्नेमा कोरोना भाइरस को महामारीका कारण रोकिएको थियो । अब आउँदो वैशाखमा चीनको प्राविधिक टोली आउने पक्का भएको छ । टोलीले चार किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्नेछ ।
“चार किलोमिटर गहिरो ड्रि’लिङ गर्नका लागि निकै गाह्रो छ तर असम्भव भने होइन । भौगोलिक विकटताले गर्दा उपकरण लैजान समस्या छ । सबै उपकरण र स्रोत–साधन भएमा कम्तीमा दुई वर्षमा ड्रिलिङको काम सकिनेछ’, डा. रजौरेले भन्नुभयो ।
“पे’ट्रोलियम पदार्थ कहाँ र कति प’रिमाणमा छ भन्ने थाहा भएपछि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नि’ष्कर्ष सरकारले निकाल्नेछ । लागतभन्दा पेट्रोलियमको परिमाण कम हुने जस्तो देखिएमा सरकारले उत्खननको काम नै बन्द गर्न सक्नेछ ।
“आशा गरौँ उत्साहित भएर बुर्कुसी मार्न हतार नगरौँ । हाम्रो जस्तै भौगोलिक अध्ययन भएका र सङ्केत देखिएका भारत र पाकिस्तानका केही क्षेत्रमा मनग्य पेट्रोलियम भएको पाइएको छ । हाम्रोमा पनि लागत अनुसारको फाइदा हुने खालकै खानी होला भन्ने आशा गरौँ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले भन्नुभयो ।
“दैलेखमा रहेको भनिएको पेट्रोलियम खानीको अध्ययन र अन्वेषण गर्न नेपाल र चीन सरकार बीच २०७२ सालमा सहमति भएको थियो । २०७६ सालको कात्तिकमा नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त टोलीले अध्ययनको सुरुवात गरेको थियो । अध्ययन र अन्वे’षणको आर्थिक र प्रावि धिक सहयोग चीन सरकारले नै बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
Prevसाह्रै दुखद खबर : पोखरामा घरको छतबाट ख’सेर एक महिलाको मृ,त्यु !
Nextड्युटीमा बच्चालाई दूध खुवाउँदा महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बाध्य पारियो
नायक प्रसान्त तामाङ्गको आमाको असमाहिक नि:धन,लेखे रूहाउने स्टाटस
मासिक किस्ता ३२ हजार ७८५ बाटै किन्न सकिन्छ हुन्डाई क्रेटा
दार्चुलामा करेन्ट लागेर एक जना पुरुषको मृत्यु